UBUNTSHATSHELI BE-PDC YEHLABATHI YEDARTS | UNGAYIBUKELA NJANI KUMABONWAKUDE KWAYE USASAZE NGQO-IRADIO TIMES - IMIDLALO
Uyibukela njani ubuNtshatsheli bePDts yeHlabathi yeDarts -Ijelo leTV, umjelo obukhoma, ishedyuli, amaxesha
Ubuntshatsheli be-PDC yeHlabathi yeDarts ubuNtu ngokwasemthethweni banekhalenda yezemidlalo yoNyaka oMtsha kwaye kunyaka wasendle wezemidlalo kunye nehlabathi elibanzi, oko kuya kuhlala kunjalo.
Olu hlelo lwetonamenti lunokubonakala lwahlukile kwiminyaka edlulileyo, kodwa isenzo siyakulinganiswa njengoko abadlali behlabathi abagqwesileyo babizela umsitho we-PDC.
Intshatsheli ekhuselayo uPeter Wright ubuyile kumxube kunye nasekuzingeleni ukugcina isithsaba sakhe, kodwa uyakuba ngokuchasene nabachasi abaphambili kwibala lonke.
Bukela ubuNtshatsheli bePDTS yeHlabathi yeDarts ngokudlula kumdlalo we-Sky Sky kwezemidlalo
Ngelixa engakhange akhanye kwi-2020, uMichael van Gerwen uhlala eyintandokazi eshushu ukuphumelela isihloko, ngelixa uGerwyn Price naye ekwi-contition.
UMichael Smith, uJose de Sousa kunye noNathan Aspinall bakwangabanye abantu bangaphandle ukuba bacele umngeni kubaphumeleleyo, kwaye nantoni na enokwenzeka kule tumente, njengoko kuqinisekisiwe ngokuqinisekileyo nguRob Cross kwiminyaka eyadlulayo.
Jonga iinkcukacha ezipheleleyo malunga nendlela yokubukela ubuNtshatsheli bePDC yeHlabathi yeDarts bukhoma kwiTV kwaye usasaze ngqo kuyo yonke le tumente.
Itumente iqale NgoLwesithathu nge-14 kaDisemba ngo-2020 kwaye ibaleke ide NgoMvulo 4 Ngomhla kaJanuwari 2021 .
Ibanjelwa phi i-PDC World Darts Championship?
Itonamenti ibanjelwe kwindawo yayo yesiqhelo eAlexandra Palace eLondon, kwaye ngelixa abalandeli bebevunyelwe kuqala kwindawo yezithsaba, izithintelo zeTier 3 kwikomkhulu zithetha ukuba intsalela yetonamenti ayizukuhoywa.
Ungayijonga njani i-PDC yeHlabathi yeDarts Championship kwiTV kunye nokusasaza ngqo
Ungayibukela ubuNtshatsheli bePDts yeHlabathi yeDarts bukhoma Imidlalo yeSky I-Darts - yinguqulelo ehlaziyiweyo yeSky Sports Arena- yonke imihla yetonamenti ukusukela nge-12 ngokuhlwa nango-6 ngokuhlwa, ngelixa umdlalo wokugqibela uqala ngo-7: 30 ngeCawa umhla wesi-3 kuJanuwari. I- $ 18 ngenyanga idityanisiwe okanye uthabathe iphakheji yezemidlalo epheleleyo ye- $ 23 nje ngenyanga.
Ungawubukela umdlalo nge Ukupasa kosuku lweMidlalo yeSky nge- $ 9.99 okanye a Kudlula inyanga I- £ 33.99 ngaphandle kokutyikitya isivumelwano.
Abathengi beSky Sky abakhoyo ngoku bangasasaza umdlalo nge-app yeSky Go kwizixhobo ezahlukeneyo.
Ishedyuli yobuNtshatsheli bePDC yeHlabathi
Iiseshoni zasemva kwemini ziqala nge-12pm, ngelixa iiseshoni zangokuhlwa ziqala ngo-6pm.
Umjikelo wokuqala (ngolwesiBini nge-15 kaDisemba-ngeLanga nge-20 kaDisemba): Eyona iseti yeeseti zintlanu, imidlalo emine kwiseshoni nganye
Umjikelo wesibini (ngolwesiBini nge-15 ka-Dec-Weds nge-23 kaDisemba): Eyona iseti yeeseti zintlanu, imidlalo emine kwiseshoni nganye
Umjikelo wesithathu (nge-27 ka-Okthobha-ngo-uLwesibini nge-29 ka-Okthobha): Eyona nto iphambili kwiiseti ezisixhenxe, imidlalo emithathu ngeseshoni nganye
Umjikelo wesine (ngolwesibini nge-29 kaDisemba-ngoWeshumi wama-30 kuDisemba): Eyona iseti yeeseti ezisixhenxe, imidlalo emithathu ngeseshoni nganye
Ikota-yamanqam (Ngomhla woku-1 kuJan): Eyona iseti ilungileyo, iiseti ezimbini kwiseshoni nganye
Umdlalo owandulela owamanqam (Ngomhla wesi-2 kuJanuwari-ngokuhlwa kuphela): Eyona iseti yeesithoba, imidlalo emibini
Eyokugqibela (nge-3 kaJanuwari-ngokuhlwa kuphela): Eyona iseti yeeseti ezili-13, umdlalo omnye
i-arsenal vs everton live stream
ngorhatya ezinzulwini zobusuku ilanga lokukhululwa kwemuvi
uthixokazi braids ubude
ingaba iyogathi ifakwe emkhenkceni
eyona fowuni yodidi oluphakathi ngo-2020
7 07 lithetha uthando